Lisk ego taa
Lisk calculator online, onye ntụgharị Lisk. Lisk ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
Lisk ego na Nigerian naira (NGN)
1 Lisk (LSK) nhata 471.90 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 0.002119 Lisk (LSK)
Ntụgharị Lisk na Nigerian naira. Taa Lisk ọnụego Ka Nigerian naira na 28/05/2020.
Lisk ego na dollars (USD)
1 Lisk (LSK) nhata 1.21 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 0.83 Lisk (LSK)
Ntụgharị Lisk na dollar. Taa Lisk gbadaa dollar na 28/05/2020.
Ego nke Lisk abụghị nke ụlọ akụ etiti guzobere, dị ka ọ dị na ndị nkịtị. Pricnye ọnụahịa maka Lisk ịkwụ ụgwọ maka taa 28/05/2020 na-abụ ntanetị oge niile site na iji kọmputa kompenizị cryptoresxe.com Ileba anya na uzo Lisk mgbanwe mgbanwe n'ịntanetị nwere ike inye aka ịkọ ọnụego Lisk echi. Etu ọnụahịa "Lisk" 28/05/2020 "bụ maka iji n'efu. A na-emelite ozi dị na ya ozugbo.
Lisk ngwaahịa taa
Lisk na mgbanwe taa bụ okpokoro okpokoro nke isi crypto Lisk ụzọ abụọ n'ịre ahịa n'ịntanetị na ntanetị. Ọnụahịa Lisk na Nigerian naira bụ ntụpọ dịzi adị nke egosi ọnụahịa Lisk ka Nigerian naira. A na-agbakọ ọnụahịa nke Lisk na Nigerian naira s na ọrụ anyị ka agakọ ọnụ dị ka algorithm dị otú ahụ. Ọnụ ego nke azụmaahịa azụmahịa Lisk megide dollar taa bụ nke ọnụego mgbanwe nke ugbu a nke Nigerian naira megide dollar nke Central Bank. Na mgbanwe azụmahịa, ị ga - ahụ azụmahịa ozugbo Lisk - Nigerian naira. Ha na-enye ezigbo ọnụahịa azụmahịa Nigerian naira - Lisk. Mana maka ọnụego nke otu, usoro algorithm anyị na-agbakọ azụmaahịa Lisk, ọ bụghị naanị Nigerian naira.
Ego kachasị mma maka ireahịa Lisk nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
Ọnụahịa kacha mma maka ịzụ Lisk nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
LSK/BTC $ 1.24 $ 1.19 Best Lisk gbanwere Bitcoin
LSK/USDT $ 1.23 $ 1.19 Best Lisk gbanwere Tether
LSK/PLN $ 1.21 $ 1.21 Best Lisk gbanwere Polish zloty
LSK/EUR $ 1.21 $ 1.19 Best Lisk gbanwere Euro
LSK/USD $ 1.24 $ 1.19 Best Lisk gbanwere US dollar
LSK/ETH $ 1.23 $ 1.20 Best Lisk gbanwere Ethereum
LSK/BCH $ 1.23 $ 1.23 Best Lisk gbanwere Bitcoin Cash
Ọnụahịa nke Lisk na dollar bụ isi ihe na - egosi nzere Lisk. Ego nke uzo ahia dollar site na Lisk buru ibu karia na ego ndi ozo. Lisk na-akwụ ụgwọ taa 28/05/2020 dị iche na ọnụahịa - nke a bụ ego iji zụta ma ọ bụ ree ọnụ ọgụgụ akọwapụtara Lisk. Ọnụ ego Lisk - dị iche na echiche "Lisk", ebe ọ dabere na ọnụego mgbanwe ego ego. Onu ogugu di iche nwere ike inwe onu ahia di iche na mgbanwe ego ego.
Ududo Lisk na Nigerian naira bụ ego ọnụahịa nke Lisk na dollar nke atọrọ na ego nke Nigerian naira n'oge a. A na-ebugo ahịa azụmaahịa niile maka taa na nchekwa data na nkezi Lisk na-agbakọ ọnụego mgbanwe dollar, mgbe ahụ, ọ na-atụgharị gaa na Central Bank nke dollar US megide Nigerian naira, anyị na-enweta Lisk ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka taa. Lisk uru na dollar (USD) - ọnụego bụ isi nke azụmahịa azụmaahịa niile na cryptocouples na mgbanwe na-amaliteghachi. Pricegwọ nke Lisk na US dollar gbakọrọ ọ bụghị naanị site na Lisk ọnụego mgbanwe, mana kwa site na ọnụọgụ azụtara na ire Lisk, na iche na " Lisk ọnụahịa ".
Lisk ịgbakọ ihe n'ịntanetị - mmemme maka ịgbanwegharị ụfọdụ ọnụọgụ nke Lisk n'ime ego na ego ọzọ na Lisk ọnụego mgbanwe. Dịka iwu, a na-eji usoro ntụgharị ntanetị "Lisk na Nigerian naira Calculator"). Ọ na-egosiputa ego nke Nigerian naira maka mgbanwe maka ego enyere maka Lisk. Lisk Ntụgharị n'ịntanetị - mmemme maka ịmegharị Lisk gaa ego ọzọ ma ọ bụ ego ego ugbu a Lisk ọnụego mgbanwe n'ịntanetị. Anyị meere gị otu mpaghara ntanetị n'efu maka ịtụgharị crypto, nke a na-akpọ ntụgharị ego ego.